Akụkọ - Gini ka OEM / ODM putara n’ichepụta uwe?
OEM na ODM bụ ụzọ abụọ nke akwa akwa. Eleghị anya ị hụla ha n'ọtụtụ ebe. Ma gịnị ka ha pụtara kpọmkwem? Ka anyị chọpụta.
1.OEM - Ihe eji emepụta ngwa ọrụ
A na-akpọ onye na-emepụta ngwa ọrụ nke uwe na uwe na-acha ọcha ma ọ bụ dị ka onye na-emepụta akwa uwe. Usoro a nke imepụta uwe na-enye ụlọ ọrụ mmepụta ihe ohere ịmepụta atụmatụ ha na nkọwapụta akwa ngwaahịa ma jiri akara gị na ya. Zọ a nke imepụta uwe dị mma maka ndị na-enweghị atụmatụ na echiche ọ bụla dịka ụlọ ọrụ ahụ nwere ike isi nye ha ya ozugbo. Ọ ga-adị mfe mgbe ị chọrọ ikpebi ụdị ejiji ị họọrọ ka ha rụpụta ma ọ bụ rụpụta ọtụtụ.
2.ODM - Ihe eji emepụta ngwa ahịa
OEM bụ ndebiri nke Ngwaọrụ Ngwaọrụ izizi, nke bụ ihe na-agbanwe agbanwe mana ọ dịkwa mgbagwoju anya. Usoro mmepụta uwe a na-enye ụlọ ọrụ mmepụta ihe ohere ịme uwe dịka usoro gị na nkọwa gị si dị. A ga-enwe akara aha gị na ngwaahịa a, enwere ike ịhazi ya n'oge ọ bụla dịka mmasị gị. Ọ bụrụ na ịhọrọ ụzọ mmepụta ihe eji emepụta OEM, ụlọ ọrụ ahụ bụ naanị ndị ọrụ gị, yana atụmatụ na echiche niile bụ nke gị, mana ha ga-eke ha.
Agbanyeghị, ọ ga-adị mkpa ka ị ghewe oghe maka ntụle sitere na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya iji wee nwee mmekọrịta kwekọrọ n'etiti unu abụọ. Usoro nkwukọrịta mepere emepe bụkwa isi ihe iji bụrụ onye ọchụnta ego uwe OEM na-aga nke ọma ma ọ bụ akara uwe akara nzuzo. Ntinye ha n'ime ngwaahịa gị ga-enyere ụlọ ọrụ gị aka ogologo oge, ebe ha bụ ọkachamara na ọrụ ha ma ha na-ewere ngwaahịa gị dịka nke ha.